ငါးအရေခွံခွေးသည် dehydator နှင့် dehumidifier dphg150s-x ကိုကုသသည် | Twesix
ငါးအရေခွံများကိုရေခန်းခြောက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်ရေခြောက်သွေ့သောငါးအရေခွံများ၌ငါးခြောက်များနှင့်အာဟာရများရှိသည့်ငါးအရေခွံများ၌ငါးခြောက်များ၌ငါးအရေခွံများ၌ကြွယ်ဝသောငါးအရေခွံများ၌ပါ0င်သည်။ ခွေးများအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကုသမှု, စက်သည်အပူ, ခြောက်သွေ့ခြင်း, အအေးနှင့်လူအချို့နှင့်လူအချို့တို့ကိုသာပိုင်ဆိုင်သည်မဟုတ်။ ဤ funtions များမရှိဘဲစက်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ကောင်းသောအားကောင်းသောဆက်ဆံမှုများကိုမသုံးနိုင်ပါ။
Dehydrating နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး: Twsix ခွေးသည် Dehydrator နှင့် dehumidifier သည်ခွေးတစ်ကောင်နှင့်မည်သူမဆိုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီစက်ဟာရေခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းတွင် BPA အခမဲ့ဖြစ်သောထူးခြားသောဒီဇိုင်းရှိသည်။ Twsix dehydroator နှင့် dehumidifier သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မိဘများအနေဖြင့်ဖြစ်ရမည်။ ၎င်းသည်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကြိုက်ဆုံးရေခဲမုန့်များကိုရေခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ fit ဖို့အလုံအလောက်ခရီးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အသားများ, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောဤအံ့သြဖွယ်ရာခန်းမနှင့် dehumidifier နှင့်အတူရေခဲသေတ္တာကိုနှုတ်ဆက်ပါ။ ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ - အသားများ, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးအတွက်အလွန်ကြီးစွာသော။
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ dehydrole ကို၎င်း၏အရာလုပ်ရန်စောင့်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် - ဤ dehydroator နှင့် dehumidifier သည်သင်၏ခွေး၏အကြိုက်ဆုံးရန်ကုန်တွင်ကြာရှည်စေလိမ့်မည်။
စျေးကွက်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ငါးခြောက်ငါးအရေခွံများကို COD ဖြင့်ပြုလုပ်သည်ပူပြင်းတဲ့လေခြောက်စက်မီးဖိုဖြင့်ရေခန်းခြောက်သောဆော်လမွန်။ ငါးခြောက်ငါးများကိုဝါးစေရန်ရေခန်းခြောက်သောစက်များသည်အရည်အသွေးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ0င်သည်။ Tsix အားဖြင့် ခွေးသည်ခြောက်သွေ့သောမီးဖိုသည်အပူရှိန်မီးဖိုဖြင့်အပူပေးစက်သည်အပူရုံသာမကအနည်းငယ်သာလျော့နည်းစေသည်။ ဒါကြောင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းခြောက်သွေ့သောမီးဖိုသည်အပူ, အအေး, အထူးသဖြင့် dehumdifying, ဘုံပရိသတ်များ install လုပ်ခြင်းသည်ပြ issue နာကိုအမှန်တကယ်မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်လေထုအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်အခြောက်ခံစက်သည်ဤ funtions ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်ခွေးအတွက်ငါးအရေခွံများကိုခြောက်သွေ့စေသည်။
Tsix Pet Food Dehydrator မှငါးအသားအရေကိုမည်သို့ခြောက်သွေ့နိုင်မည်နည်း။
3. အပူချိန်ကို 60 ℃ 60 ℃နှင့်စိုထိုင်းဆကို 2-4 အများအားဖြင့် 10% တွင်ထားပါ။
3.5အဆင့်တွင်အပူချိန်ကို 70-75 ℃တွင်ထားပါ။ နောက်ဆုံးအစိုဓာတ်သည် 10-12% ပါ0င်သည်။
ငါးအသားအရေခြောက်သွေ့လာသောအခါငါးအရေပြားသည်အစန့်အတန်းမဖြစ်လာမီအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ, ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ။ ငါးခြောက်များကိုတံဆိပ်ခတ်စက်ဖြင့်ထုပ်ပိုးရမည်။
ခွေးသည် dehydrator ကိုဆက်ဆံသည် ခွေးကိုခြောက်သွေ့ခြင်းမီးဖို ငါးအရေပြားခြောက်စက်စက်